Haweeney Boqortooyo Ku Baddalatay Jaceyl - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA Haweeney boqortooyo ku baddalatay jaceyl
Sanadkii 2017 ayay aheyd markii Mako oo ah gabadh ka tirsan qoyska reer Boqor ee dalka Jaban ay shaacisay inay guursaneyso wiil ay isku fasal ahaayeen oo lagu magacaabo Kei Komuro, waxay sheegtay inay si weyn u jeclaatay ninkan.
Gabadhan oo lagu magacaabo Amiirad Mako, oo 25 sano jir ah ayaa waxaa awoowe u ah boqorka dalka Jaban Akihito waxayna guursatay Kei Komuro, oo ka shaqeeya xafiis Qareen kaasi oo ay isku da’a yihiin.
Amiirad Mako ayay isbarteen ninka ay calmatay sanadkii 2012 xilligaasi oo ay isku Jaamacad dhigan jireen.
Gabadhan ayaa mansabkeedii boqortooyada ku waayday guursashada ninkan maadama sharciga u yaal qoyska Boqortooyada uu dhigayo in haddii qof ka tirsan qoyska Boqortooyada uu damco in uu guursado qof caadi ah ay tahay in uu iska dhigo darajada ama maaqaamka Boqortooyada.
Waxaa si weyn isha loogu hayay arooska amiiradda iyo Kei Komuro maadama xaaladda qoyska boqortooyada si weyn ay dadka iyo warbaahinta ula socdaan, waxaana laga filayay inay ilaaliyaan hab-dhaqanka iyo xeerarka u yaalla arooska boqortooyada balse taas ma dhicin.
Labo bilood kadib, waxaa soo baxay warar sheegayo in muran ka dhashay lacag uu dhexmaray hooyada dhashay Kamuro iyo gabadh hadda ka hor uu la socon jiray. Gabadha waxay ku anddacootay in Kamouro iyo hooyadiisa ay ku guul-dareysteen inay bixiyaan lacago deyn ah oo ay ku laheyd. Arrintani waxay keentay su’aal ah in Kamuro uu dhaqaale ahaan is maareyn doono mustaqbalka iyo in kale.
Ms Mako waxay wax ka dhigatay jaamacadda caalamiga ah ee Christian University ee ku taalla Tokyo halkaas ay ka baratay culuumta dhaqanka iyo farshaxanka, waxay shahaadada labaad ee jaamacadda ka soo qaadatay jaamacadda Leicester ee Ingiriiska.
Dadka ku dhaw Mako waxay ku tilmaameen qof madaxbanaan oo furfuran oo ka dhiidhisa yoolkeeda iyadoo gudaneysa waajibaadkeeda amiirnimo, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Kyodo.
Waxay markii ugu horreysay 2012 la kulantay Kamuro xilli uu socday kulan ay lahaayeen ardey oo loogu diyaarinayay inay dibadda waxbarasho loogu qaado, waa qareen wax ka dhigta Jaamacadda Fordham University ee ku taalla New York dalka Mareykanka.
Wuxuu dalka Japan kusoo laabtay bishii September ee sanadkii lasoo dhaafay, Mr Kamuro waxaa la arkayay isaga oo aanan si wanaagsan u labisneyn , dadka qaar waxay sheegeen in uusan u qalmin in uu guursado amiiradda.
Ugu dambeyntii labada lamaane wey is guursadeen, arooskooda ma waafaqsaneyn xeerarka u yaalla qabashada aroosyada boqortooyada, waxayna Mako diiday inay bixiso lacag gaareyso $1.3m oo doolar taas oo la siiyo boqortooyada marka qof laga guursanayo.
Gabadhan waxay hareer martay dhaqankii iyo xeerarkii u yaallay boqortooyada, Ms Mako waxay noqotay qofkii ugu horreeyay oo ka tirsan boqortooyada oo tallaabadaas qaada.
Dibadbax ayaa maalintii uu dhacayay arooskooda ka dhacay halkaas, dadka waxay siteen boorar ay ku qoran yihiin, “ilaaliya gurigeena’, ” Qoyska boqortooyada waa nolosha Japan”
Hadal heynta iyo weerarka ay kala kulmeen baraha bulshada waxay saameeyeen maskaxeed ku yeelatay Mako haatan waxay wajaheysaa welwel, sida laga soo xigtay warbaahinta Imperial Household Agency.
Mako waxay beenisay wararkaas oo ay ku tilmaantay mid been ah.
“Kei Komuro, qof aan ku baddasho ma hayo, guurkeena waa mid xulasho oo qalbiyadeena ayuu kasoo go’ay” ayay tiri Mako.
Lamaanahan ayaa la filayaa inay u wareegaan Mareykanka halkaas oo uu qareen ka yahay Mr Kamuro.
Previous articleSarkaalka ugu sareeya ciidamada Maraykanka oo afka furtay ka dib tijaabadii gantaalka aan laga hortagi karin ee Shiinaha
Next articleGabar dhakhtar oo ajnabi ah oo iska soo tuurtay dabaq ku yaalla magaalada Garoowe